Xog: Sidee ayey beesha Xawaadle ku heshay xilka madaxweynaha Hir-Shabeelle - Caasimada Online
Home Warar Xog: Sidee ayey beesha Xawaadle ku heshay xilka madaxweynaha Hir-Shabeelle
Xog: Sidee ayey beesha Xawaadle ku heshay xilka madaxweynaha Hir-Shabeelle
Jowhar (Caasimada Online) – Tan iyo markii uu soo bilowday qorshaha dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waxaa hareeyay diidmo ka imaaneysay Beesha Xawaadle oo diidmo kala hor timid qorshihii madaxweyne Xasan Sheekh.
1 – In la siiyo xilka madaxweynaha
2 – Caasimadda la siiyo Jowhar
1 – C/raxmaan Odowaa (Wasiirka Arrimaha Gudaha)
2 – Mahad Maxamed Salaad (Wasiirka Madaxtooyada)
Labadan mas’uul qaabkii ay ergooyinka u qeybiyeen iyo maamulkii hore ee shirka Jowhar ay la tageen waxay aad u sii fogeysay Beesha Hiiran ugu tunka weyn, waxayna keentay inay shirku galo xaalad jahawareer ah.
Wareegtadii madaxweyne Xasan Sheekh ee caasimadda loogu magacaabay Buuloburte isla markaana xarunta shirka loogu doortay magaalada Jowhar waxay sii kordhisay shakigii beesha Xawaadle oo u krkeysay in loo degay qorshe looga takhalusayo.
8 bilood kadib oo shirku hore u socon waayay, waxaa arrinta la wareegtay IGAD oo keentay qorshe ah in Beesha Xawaadle la siiyo xilka madaxweynaha iyadoo hoos ku wadatay musharax kasoo jeeda beeshaasi, arrintan iyo rajo soo gelisay shirka, haddana arrintu ku socoto.
Inkastoo Ugaas Xasan uu ka cago jiiday inuu si rasmi ah u aqbalo shirka ka socda Jowhar, waxaa la ogayahay inuu ilaa xad la dhacsan yahay xilka beesha u soo hoyday, waxaana hadda socda olole Xasan Sheekh ku doonayo inuu xilka madaxweynaha Hiiraan ku soo baxo shaqsi uu isagu wato isagoo doonaya inuu saacadaha ugu danbeeya afgembiyo musharaxa IGAD.